NTỤGHARỊ UCHE:EKERESIMESI NA ỊHỤNANYA NDI IGBO – hoo!haa!!
Taata bụ abalị iri abụọ na ise n’ọnwa mbụ n’afọ 2019. Ihe nke a pụtara bụ na o meela otu ọnwa kpọmkwem ejiri mee emume Ekeresimesi nke afọ gara aga bụ 2018. Elee ya anya n’akụkụ nke ọzọ, ọ fọla naanị ọnwa iri na otu, ka nke 2019 biri ọkụ.
Ọ dị mkpa ka anyị leba anya n’otu ụzọ maọbụ ụzọ abụọ ma hụta ka emume Ekeresimesi si emetụta ịhụnanya ndi Igbo hụrụ onwe ha nakwa ụzọ ụfọdụ ha si esite n’emume Ekeresimesi egosi ịdị n’otu ha.
Ihe m chọrọ iji tinye ọnụ n’okwu a, abụghị ka mụ nwukwasa onye ọbụla anya ọkụ n’ụzọ osi akpata nri. Kama ọbụ imetụ aka na mkpa ọdị mmadụ imedebe ihe n’oke ma gosikwa nwanne ya ịhụnanya na ịdị n’otu.
Achọrọ m ileba anya naanị maka akparamagwa ndi ọkwọ ụgbọ-ala n’oge anyị kpụ n’ọnụ. Akụkụ ndi ọzọ dịkwa mana ka anyị weregodu nke a ugbu a.
Ebi m n’akụkụ Abụja. Tupu amalite Ekeresimesi mụ na-ekwu maka ya, anyị na-akwụ puku naira atọ na naari naira ise isi n’ọdụ ụgbọ-ala Zụba rute Enugwu. Ihe ejikwanụ ebu otu akpa osikapa site n’otu ebe ahụ rute Enugwu bụ naari naira ise.
N’oge Ekeresimesi gara aga, ihe eji bunaa ndi mmadụ site na Zụba dị n’Abuja rue Enugwu bụ agbata puku naira iri nakwa puku naira iri na abụọ. Ihe nke a pụtara bụ na onye ọbụla n’ime ndi so ụzọ ahụ mee njem kwụrụ ugwọ ụgbọ-ala ya ugboro atọ maọbụ karịa n’otu nje. Ihe eji buo otu akpa osikapaa sitere n’otu puku naira rue puku naira abụọ.
Ihe oji metuta m n’obi itinye ọnụ n’okwu a abụghị n’ụdị ajọ akparamagwa a malitere taa. Mba! Ọbụ ọdịwara gboo ma bụrụkwa ihe ọjọọ.
Mana ọtụtụ afọ ndi ọzọ gara aga, ana-enwe ụkọ mmanụ ụgbọ ala n’oge Ekeresimesi, nke mere na ikwue okwu dịka onye enweghị ụgbọ-ala, ajụọ gị ma ịmakwara ego ole ana-ego otu lita mmanụ ụgbọala.
N’Ekeresimesi gara aga, mmanụ ụgbọ-ala dị aghara aghara. Erekwara ya ọnụ ala nke na ọfọrọ nwa ntakịrị ka-ana-agbanye ya ndi mmadụ n’efu.
Ihe kpatara ụmụ Igbo ji ebuliri ụmụnne ha ego ọnụ ahịa n’oge a, amaghị m. Ntinye ego ana-etinyere ndi na-eme njem n’oge Ekeresimesi na-abụkarị site n’akụkụ Naijiria ndi ọzọ gawa ala Igbo. Ima atụ, n’oge ahụ, ego ana-akwụ site N’Abuja gawa Kano maọbụ Kaduna nọkwa ebe ha nọbu.
I nwere ike chee n’akụkụ ebe ndi a mụ kpọrọ aha anaghị emekarị emume Ekeresimesi. Mana ha na-eme nke ha kpọrọ Sala. N’oge sala ha, ha anaghị etinye ọbụladị sịsị n’ego njem ụgbọ-ala ha. Kama, ụfọdụ n’ime ndi aka ji akụ ha na-ebu ndi nje m ha n’efụ.
Ọbụghịkwa naani n’oge Ekeresimesi ka anyị bụ ụmụ afọ Igbo na-akpaso onwe anyị ụdị nkanka agwa dị otu a.
Anyị bụ ndi bi n’ugwu-awụsa na ịgba ọsọ abụrụla ọyị. Ma ọbụghị ọsọ ndọrọ-ndọrọ ọchịchị, ọbụrụ nke okpukpere chi. Mgbe niile ọdara anyị otu a, ọbụ ụdịrị ihe a ka anyị na-ahụ. Ihe ịtụ aka n’ihu diara ụmụ Igbo bụ, n’ụdị oge a, ebe ndi Igbo na-amabinyere ụmụ nne ha ọnwụ na-achụ ọsọ ego, ogbo ha ndi ọzọ dịka ndi Ofee na ndi Aboki na-eburu ndi nke ha n’efu bulaga ala ha.
Ụdị oge ndi a, dịka oge emume Ekeresimesi nakwa oge ọgbaghara ka anyị kwesiri igosi ụmụnne anyị ịhụnanya na idị n’otu karia igosi ha mkpagbu nakwa itinye ha n’iru uju.
Ndi Ọhaneze nakwa otu ndi ọzọ na-akwalite ọdịmma na idị n’otu ndi Igbo biko tinye nụ ọnụ n’okwu a. Ọdị m ka ọdị ezigbo mkpa.
Onwere ọtụtụ ihe ndi ọzọ yiri ihe ndi a, mana ka anyị hapụ, ka o rue ụbọchị nta, ka anyị banye n’owere nchi
Demenu, ya gazikwara anyị.
Previous Post: IJIPT:ATỤỌLA ONYE NTA AKỤKỌ NGA MAKA ỊGBA AKWỤLA NWOKE AJỤJỤ ỌNỤ
Next Post: Ogbonnaya ọnụ nwere ihe mberede okporo ụzọ